Ethiopia Waxey Dhaantaa Abdiqaasim
Waxaa lawada ogsoon yahey in kaligii tliyihii dowlada Ethopia Mingisteo uusan joogin maanta, xilka maantana eey hayaan dad la dhihi karo ugu yaraan waxa eey wax weeyn u qabteen umada Soomaliyeed iyadoo laga fiirinaayo dhinacyo badan. Balse aan inyar ka xasuusiyo kuwa aan laheyn abaalka.
1. Kadib markii dagaalada sokeeye eey naafeeyen dalka ayaa tobonaankun oo soomaali ah oon laheyn hoy u soo hayaameen dal bari ahaan jirey cadawgeeena. Dadka reer Ethiopia iyo xukuumada maanta ka jirta labadaba waxey umadan usoo dhoweeyeen si aan hagar laheyn.
2. Maamulada dalka ka jira sida waqooyiga Soomaaliya, gobolada waqooyi bari iyo kuwan maanta madaxbananida rasmiga gaarey ee Koofur Galbeed, intaba waxa eey laleeyhiin macaamiil aan marna la soo koobi karin oo ku dhisan darisnimo iyo wax wada qabsi. Waxaa xaqiiqo ah haddii laga hadlo Ethiopia iyo Soomaalia iney colaad na dhex martey balse aanan maanta la xasuusan karin kadib markii aan aragney kuwo Soomaalinimo, muslinimo sheganayo oo dalki, dadki iyo xayawaankiba aan u aabo yeelin.
Kooxda Carte ama ciidamada Cabdi qaasim ha noqdeen Golaha Sacabka ama reerkiisa waxa eey saldhig u yihiin baabinta dalkeena waana arin aad u murugo badan in survey beena la sameeyo si looga dhaadhiciyo dadka aan arimaha soomaaliya waxba ka ogeyn iney cadeyn noqon karto in soomaliya dowladnimadeeda eey Itoobiya hortaagan tahey.
Taas waa mid aan waxba ka jirin, dhibta dalkeena inaga ayaa sabab u ah, waayo kama run sheegno xaqiiqda dalka ka jirto. Abdiqaasim waxuu isku darsadey labo arin oo aan marna qof nasiib leh isku raacin
1. isagoo ka mid ahaa kuwi dalka intaa gaarsiiyey(Siad Bare Rajiim) iyo
2. isagoo ka soo jeedo gacan ku dhiiglayaasha dalka baabashey walina hantidi dalka usii wado dalalka carabta oo iyaguna xabadaha ugu soo badalo. Waa nin jiritaankiisuba eey ku dhisan tahey dhiiga agoonta hanoqoto inuu lacago been abuura usoo daabaco ama uu doolarki deeqda loo siiyey haweeneydiisa ku raro. Dalkeena dhibaatadiisa waxaa saldhig u ah dalalka eey kamidka yihin Liibiya, Yemen, Eretrai, Sudan, Jabuuti iyo dadka ka soo guurey guryahoodi maalin cadna rabo iney ugu talshaan dad guryahoodi dagan. Haddii salaad la tukanayo waxaa dadka hor kaco ruuxa ahlu beytka ah in kuwo soo duuley eey gurigaada kuugu talshaana waa wax aan dhici doonin.
Ugu danbeentina waxaan u sheegi lahaa kuwa fikrada gaaban sida Ismaaciil Cumar Geele inuu arimaha Soomaliya faraha kala baxo maadaama uusan aqoonin dhibaatada halka eey inaga heeyso. Waxaana rajeyneyaa in agoonta Soomaaliyeed lacagtooda iyo guryahoodana aadan mushaarad uga dhigan shaqaalahaga oo aaneysan wax eey cunaan heysan.